आत्महत्या गरेकी भारतीय डाक्टरका पतिले रुँदै बताए घटनाको वास्तविकता [भिडियोसहित] – Health Post Nepal
आत्महत्या गरेकी भारतीय डाक्टरका पतिले रुँदै बताए घटनाको वास्तविकता [भिडियोसहित]
२०७८ चैत १८ गते १०:५६
काठमाडौं–भारत राजस्थानको दौसा जिल्लास्थित लालसोट सहरको आनन्द अस्पतालमा सुत्केरीका क्रममा एक महिलाको मृत्यु भयो। त्यसपछि परिवारजनले शवलाई अस्पतालअगाडि राखेर प्रदर्शन गरे। अपरेशनमा संलग्न डा. अर्चना शर्माविरुद्ध हत्याअभियोगमा मुद्दा दर्ता पनि भयो। आफूमाथि हत्या अभियोग लागेपछि ४२ वर्षीया शर्मा डिप्रेसन र तनावमा आइन् । र, आफूलाई आएको धम्की र जेल जाने डरले २९ मार्चमा झुण्डिएर आत्महत्या गरिन् । उनको कोठाबाट एक सुसाइड नोट पनि प्राप्त भएको थियो, जसमा उनले आफू निर्दोष भएको उल्लेख गर्दै मृत्युले मात्र आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने बताएकी थिइन्। सो घटनापछि डाक्टरहरु सेवा बन्द गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए।
डा शर्मा गोल्डमेडलिस्ट थिइन् भने त्यस क्षेत्रमा राम्रो सर्जनको रुपमा नाम कमाएकी थिइन्। उनी मेडिकल कलेज गुजरातको एशोसियट प्रोफेसर पनि रहिसकेकी थिइन्।
खासमा उक्त घटनाको वास्तविकता के थियो? डा शर्माका पति एवं सोही अस्पतालका सञ्चालक डा सुनीत उपाध्यायको एक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। त्यसका अशंहरुः
मेरी पत्नी डा अर्चना शर्मा, गाइनोकोलोजिस्ट गोल्ड मेडल, उनले झुण्डिएर आत्महत्या गरिन्। अस्पतालमा आशा बेहरवा नामकी महिलाको डेलीभरि भएको थियो। उनको अवस्था जटील थियो। जयपुरबाट रेफर गरेर ल्याइएको थियो। ती महिलाको यसअघि पनि यही अस्पतालमा सिजेरियन अपरेशन भएको थियो, जसमा जुम्ल्याहा बच्चा भएका थिए।
यहाँ ल्याइएपछि ती महिलाको नर्मल सिजेरियनबाट डेलीभरि भयो। २ घण्टापछि उनको मासिभ पीपीएच भयो। हामी २ घण्टासम्म उनलाई बचाउन संघर्ष गरिरह्यौं। २ युनिट ब्लड पनि चढायौं। तर उनलाई बचाउन सकेनौं। उनका परिवारले देखेका थिए–हामीले सारा अस्पताल, ओपीडी बन्द गरेर उनलाई बचाउन कति संघर्ष गरेका थियौं भनेर।
परिवारले पनि ‘तपाईंले पनि बचाउन कति कोशिस गर्नुभयो, हाम्रै भाग्य खराब थियो’ भनेका थिए। त्यसपछि परिवारले शव घरसम्म लैजान एम्बुलेन्स मागे। हामीले पनि निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गरायौं। उनीहरुले शव घरमा लगे।
घर लगेपछि परिवारले महिलाको अन्तिम संस्कारको तयारी गरिररहेका थिए। त्यसपछि मलाई जानकारी आयो–शिवशंकर बालिया जोशी ती महिलाको घर गएछन् र परिवारलाई राम्रो क्षतिपूर्ति दिलाउँछौं भन्दै शवलाई पुनः ल्याएर अस्पतालअगाडि राखे। सय–दुई सय मानिसको भीड जम्मा गरे। र, भारतीय जनता पार्टीका केही नेतालाई बोलाए। हरकेश भटलाना, जितेन्द्र होठवाल, डा किरोडीलाल पनि आए। शिवशंकर बालियाजोशी आनन्द अस्पतालमा यसअघि पनि फिरौती माग्ने कार्यमा संलग्न हुँदै आएका थिए।
एक डाक्टरको मार्मिक सुसाइड नोटः सायद मृत्युले नै मेरो निर्दोषिता प्रमाणित गर्नेछ
हामीले उनीविरुद्ध एफआइआर पनि दर्ता गरेका थियौं। तर प्रहरीले किरोडीलालको डरले उनीविरुद्ध एफआइआर पनि दर्ता गर्दैनथ्यो। उनी पहिलो पुलिसको पनि टाउको फुटाइसकेका व्यक्ति हुन्। तर हरेक पटक डा किरोडीलालले उनलाई बचाउँदै आएका थिए। र, उनको नाममा शिवशंकर जोशीले गुण्डागर्दी गर्दै आइरहेका थिए।
यो प्रकरण अन्त्य होस् भनेर हामीले पूरै प्रयास ग¥यौं। तर प्रहरीले उनीहरुको दबाबमा हत्याको मुद्दा दर्ता गर्‍यो। बिहान जब डा अर्चनाले यो खबर पढिन्, उनी हडबडाइरहेकी थिइन्। भनिन्–बालिया जोशी, महेश बिहारीले मलाई जेल हाल्लान्? राजस्थान पत्रिकाका पत्रकार महेश बिहारी पनि एक दलाल हुन्। उनले हाम्रो पक्षको समाचार छापेनन्, मात्र उनीहरुको पक्षको समाचार छापे।
राजस्थान पत्रिका पढेर अर्चना निकै डराइन्। उनलाई लाग्यो–यिनीहरुले मलाई अब पक्कै जेल हाल्नेछन्।
मैले सम्झाएँ–त्यत्तिकै किन जेल हुन्छ र ?
सायद उनको त्रास कसैगरी पनि दिमागबाट निस्कन सकेन।
र, मलाई पनि बताइनन्। र, साढे ११ बजेतिर उनले आत्महत्या गरिन्।
मेरो तपाईंहरु सबैसँग बिन्ती छ–अस्पतालअगाडि शव राख्ने सिस्टम बन्द होस्। डा किरोडीलालजस्ताले यी गुण्डाको संरक्षण गर्न बन्द गर्नुपर्छ। र यी छोटेमोटे बालिया जोशीजस्ता नेतालाई तुरुन्त गिरफ्तार गर्नुपर्छ।